प्रधानमन्त्री ओलीको जोसीलो भाषण देखी विरोधीलाई व्यङ्ग्य,अब जता फर्कियो त्यतै सरकार (भिडियोसहित) - Enepalese.com
प्रधानमन्त्री ओलीको जोसीलो भाषण देखी विरोधीलाई व्यङ्ग्य,अब जता फर्कियो त्यतै सरकार (भिडियोसहित)
इनेप्लिज २०७५ मंसिर ११ गते २२:२३ मा प्रकाशित
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार काम गर्न व्यस्त रहेको बताएका छन् । कसैले सरकार कहाँ छ ? कसैले जुम्रा पनि मारेन, सिन्को भाँचेन भन्ने गरेको भन्दै उनले भने, ‘यो सरकार जुम्रा मार्न बनेको होइन । देश विकास गर्न बनेको हो ।’
सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अघि भने, ‘मजदुरलाई सोध्नुस्, श्रमजीविलाई सोध्नुस्, दुख पाएका गरिबलाई सोध्नुस् सरकार कहाँ छ ?
जता फर्कियो, त्यता सरकार देख्न थालेपछि विरोध गर्नेहरु आफैं चुप लाग्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।
सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा कार्यक्रममा तामझाम बढी भएको भन्दै आलोचना भएको छ । तर, नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने, यो तामझाम मैले देखिनँ भन्नेहरुलाई देखाउन हो । थाहा पाउनु भनेर हो ।’
उनले अबका कार्यक्रमहरुमा बाजा समेत बजाइने बताए ।